Mihamaro anisa hatrany ankehitriny ireo tanora malagasy liana sy miditra amin’ny tontolon’ny asa tanana, toy ny zaitra. 21 décembre 2020
Manoloana ny fahatapahan’ny asa teny amin’ireo orinasa afaka haba sy orinasa tsy miankina ihany koa dia betsaka ireo niezaka namorona asa ho an’ny tenany.
Toy ny famoronana lamaody, ohatra, ny fampianarana zaitra ao amin’ny “Eccova “ dia mivonona mandrakariva amin’ny fanosehana ireo tanora te ho matihanina tanteraka amin’ny sehatry ny zaitra.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (416) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (159) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (72) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (70) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (64) 2 mars 2021 Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary CORONAVIRUS ATY DIANA (50) 2 mars 2021